-Ubuciko ngaphandle kokunciphisa isitayela-
Sikholelwa ukuthi izingubo ezikhululekile akudingeki zibe yisithukuthezi.Umkhiqizo wethu awukho ukutshela abesifazane ukuthi bangagqoka kanjani izinto. Konke mayelana nezinga lokunethezeka kwekhasimende kanye nesitayela ahlose ukuyithumela. Ngakho-ke, ngaphezu kwazo zonke izinto, sifisa ukuletha bobabili ndawonye emzimbeni wethu ukukhombisa ukuthi izingubo zingase zikhululeke kakhulu futhi zifake imfashini ngesikhathi esisodwa.
Sizibophezele ngokuqhubekayo ukwethula izinto ezintsha, ezintsha nezindlela ezingavamile. Kusukela ekukhethweni kwethu okukhulu kwezingubo ezibonakalayo eziduduza izinga eliphakeme lokududuza izicathulo ezinhle ezihambisana kahle, ngokuqinisekile ukuphakamisa izinga lakho nokuphakama ngezinto zethu zefashini.
-Fusion of izitayela ezahlukene-
Izembatho esiteshini sethu zibonisa ubuntu bethu, ithimba elihlukahlukene, nokunambitheka okunamandla. Ithimba lethu lihlanganisa abantu abavela emlandweni ohlukile ngezindlela zokuzilibazisa ezihlukahlukene, ngakho-ke isifiso sethu sokufaka inhlanganisela yezitayela ezibanzi ukuze sithole konke okuhle.
Chofoza lapha ukufunda ngezindinganiso zenkampani noma vakashela kwethu eliyisiqalofuthi uthole imikhiqizo yethu ehlukile!